Ntutu isi kacha mma na North America: Zute ndị stylist
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọrụ Mgbasa Ozi Waya » Ntutu isi kacha mma na North America: Zute ndị stylist
Ọrụ Mgbasa Ozi Waya
Ndị otu ọkachamara mara mma (PBA) nwere obi ụtọ ịkpọsa ndị meriri na 2021 North American Hairstyling Awards (NAHA), asọmpi kacha asọpụrụ ụlọ ọrụ mara mma na North America. NAHA na -asọpụrụ ndị ọrụ nka kacha mma na nka nka na -akwalite oke nka na okike. N'ime ihe karịrị afọ 30, ọtụtụ puku ndị omenkà nwere nka ejirila NAHA mee ihe ngosi iji gosipụta ọrụ ha iji merie NAHA na -achọsi ike.
Emere emume a dị mkpa na Satọde, Ọgọstụ 29th na Mandalay Bay Resort na Convention Center n'oge Cosmoprof North America (CPNA) na Las Vegas., Nevada.
NAHA na -eme ememme ụlọ ọrụ na -enye nka na njiri mara njiri mara 15 n'ofe ntutu na nka nka, gụnyere Salon ọhụrụ na -akpali akpali nke afọ na onye nkuzi nke afọ.
Nina Daily, onye isi oche PBA na -ekerịta, "Nke a bụ afọ a na -enwetụbeghị ụdị ya maka NAHA, mana imepụta ihe dị elu na nka dị oke ọnụ na -anọchite anya ya bụ ihe kacha dị egwu n'akụkọ ihe mere eme asọmpi ahụ." "Industrylọ ọrụ ahụ gbakọtara iji nye ike n'ime ihe ọhụrụ na mmekọrịta enyi, anyị enweghị ike ịdị mpako maka ndị mmeri, ndị ikpeazụ na onye ọ bụla tinyere oke agụụ na ume iji mee ka ihe ịga nke ọma n'abalị a."
NAHA 2021 bụ onye ama ama ama ama ama aha ya na onye na-ahụ maka ihe okike ụwa Michael Shaun Corby gosipụtara ihe ngosi nka site na Silas Tsang na Ulta Beauty Pro Team. Ihe omume a na -aga n'ihu na -adị ma a na -achọ ya maka ndị na -enweghị ike ịbịa n'onwe ha.
Na mgbakwunye na mmemme nturu ugo, NAHA 2021 gụnyere nnabata nnabata kapeeti na-anabata ndị ikpeazụ NAHA, ndị mmeri NAHA gara aga, ndị na-eduga ndị mara mma, na ndị a ma ama na ihe nkiri ahụ, Onye Mmekọ Media Media kwadoro ya. Ụlọ Mmanya Ọgbara ọhụrụ na Anne Morattoalong nwere akara ụlọ ọrụ, onye nkuzi, onye na -akpụ isi na onye na -eme ihe nkiri Rodrick Samuels.
Ndị mmeri NAHA 2021 NAHA:
Stylist Editor nke Afọ- Danielle Keasling
Onye nkuzi afọ- Sam Villa
Igwe ntutu- Suzanne Sturm
Ịkpụ ntutu- Stephen Moody
Onye na-edozi ntutu nke afọ- Silas Tsang
Salon na-akpali akpali nke afọ- Salon agba agba + spa
Onye na-ese ihe etemeete nke afọ- Nohemi Capetillo
Master Hairstylist nke Afọ- Ruth Roche
Ndị nwoke na-edozi ntutu nke afọ- Nieves Almaraz
Mmụta edozi isi nke afọ- Alisha Kemp
Nhazi na mmecha- Nick Stenson
Otu nke Afọ- Julie Vrie
Turkey na -emechi mgbochi COVID maka ndị mbịarambịa
Bangkok chọrọ Sandbox nke ya maka njem
New York City chọrọ ugbu a ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi COVID maka…
Saịprọs na-eme nnwale COVID-19 kwa izu dị mkpa maka mmadụ niile ...
Raging Turkey Wildfires na-akpalite njem nlegharị anya na ...
Otu ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nwere ike isi gbaa ndị nkwado ume ...
India emeghela ugbu a maka ndị njem si mba ofesi gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa
United Airlines na-atụ anya ịlaghachi na Uru na ...
Ime ka ndị dike DC na Villians site na egwuregwu ekwentị
Ndị enyi na ndị ikwu na -eleta ga -anya ụgbọ njem ...
Ndị a bụ obodo nri kacha mma na 2021 na America
Ụgbọ elu Russia dara n'ugwu na Turkey na -egbu ...
Onyinye njem nlegharị anya nke kọntinent ọhụrụ nke ndị Afrịka nyere ...
Ụgbọ elu Alaska na-ebugharị San Francisco Giants-themed ...
Seychelles na Chakwasa ihie na mmemme emebere nke Itali
Ọnye bụ onye minista njem nlegharị anya ọhụrụ Saint Lucia?
Ebe ụgbọ elu azụmahịa kacha ibu n'ụwa ...
Poland kwupụtara ọnọdụ mberede na ókèala Belarus ...
Mauritius kwụsịrị ịpụ iche maka ndị njem ji…
Site na Super Fun Hot Spot ruo Mgbidi Nchebe